Intle 2 Bedroom Oasis in Glasgow City Centre.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJamie
Igumbi elihle, elinomgangatho ophezulu othe tyaba obekwe yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukuya kwindawo yokuthenga ephambili, imivalo kunye neendawo zokutyela. Ilungele ukutyelela iKholeji yoBugcisa kunye neeYunivesithi.
Amagumbi amabini okulala amabini. Indawo yokuphumla eqaqambileyo, esandula ukulungiswa, ikhitshi elitsha kunye negumbi lokuhlambela. Le flethi ikufutshane neWest End kunye neZiko leSixeko. Iindawo ezininzi zokutya ezimnandi ezikufutshane. Yindawo entle yokuhamba ngeenyawo: Ivenkile enkulu ekufutshane yimizuzu emi-5 kude.
Isikhululo sombhobho weCowcaddens kukuhamba nje imizuzu emi-2 ukusuka kwiflethi.
Iflethi ifudunyezwa embindini kwaye isandula ukulungiswa, ngoko iziva intsha, icocekile kwaye yangoku. Igumbi lokuhlala liqaqambile kwaye libanzi lineefestile ezinkulu ezikhanyiswe kabini ezivumela ukukhanya kwendalo okuninzi! Kukho i-TV ye-HD ene-Freeview kunye ne-DVD player kunye nokhetho lweeDVD kwaye kunjalo, i-wifi.
Kwigumbi elipholileyo elingaphambili, kukho ibhedi yesofa egotywayo egobe kakuhle kakhulu kunye nedesika yokusebenzela. Iholo iqaqambile kwaye inemvakalelo yanamhlanje.
Kukho iwodrophu kwigumbi lokulala elinentsimbi kunye nebhodi yoku-ayina kunye nengubo eyongezelelweyo. Igumbi lokulala eliphindwe kabini linesifuba esikhulu sedrowa kunye negumbi elinye elinebhoyila kunye nezinto zokucoca. Omabini amagumbi okulala kunye negumbi elingaphambili aneemfama ezimnyama.
Igumbi leshawari liqaqambile kwaye langoku lineshawari enamandla emangalisayo enamanzi ashushu angaguqukiyo. Kukho iitawuli ezithambileyo ezikhoyo kwi-ottoman kwigumbi lokulala elikhulu.
Ikhitshi linomatshini wokuvasa, i-oveni edityanisiweyo/igrill, itoaster, iketile, icafetere, iihobs zerhasi kunye nefriji kunye nesikhenkcisi. Kukho izitya ezaneleyo, iiglasi kunye nezixhobo zokusebenzisa abantu aba-6.
Usebenzisa kuphela indlu yonke. Ngokubanzi sisakhiwo esizolileyo ke ngoko nceda ugcine umthetho wokuba akukho maqela okanye umculo ongxolayo emva kwentsimbi ye-11pm.
Ukuvala kukuvalwa okuqhelekileyo oya kukufumana kwiibhloko zezindlu zamandulo, ngamanye amagama… ubone iintsuku ezingcono! Kodwa ndicela ungakuvumeli oku kukuyekise, iflethi ngokwayo yeyanamhlanje, icocekile, kwaye iyindawo ezolileyo entliziyweni yesona sixeko sibalaseleyo eSkotlani !!
Iflethi isembindini wengingqi yabafundi emnandi. Isikolo soBugcisa saseGlasgow yindawo nje yokulahla ibrashi yokupeyinta :)
Uya kuba nayo yonke iflethi kuwe.